Yako Blog RPMs Akabatanidzwa, asi Hausi Kuhwina Mujaho! | Martech Zone
Yako Blog RPMs Akabatanidzwa, asi Hausi Kuhwina Mujaho!
China, May 10, 2007 Mugovera, Kukadzi 25, 2017 Douglas Karr
Kunze kwerubatsiro rwandinoedza kupa mamwe mabloggi kuburikidza neiri blog, ini ndinonyatso batsira mashoma mabloggi maoko-on. Nehurombo, ini handifanirwe kushandisa yakawanda nguva yekuita izvo zvandaizoda - ndinofanira kushanda kubhadhara zvikwereti. Nezuro ndakatora zuva racho ndikapinda musangano wedunhu webhu. Musangano uyu wainakidza, zuva rakaumbana rizere nemaawa e1 maawa anga akazara-neruzivo kubva kune vewebhu vehunyanzvi
Iyo yekutanga blogging chikamu yakanga yakazara! Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge taita mabloggi, iwe unokanganwa kuti vanhu vazhinji havana kubudiswa pamablog kana tekinoroji yepasi Mumwe wemibvunzo yakanakisa yechirongwa ichi waive, "Ndingaudza sei musiyano uripakati peblog nebhuku rewebsite." Ini ndaitofanira kufunga kweminiti, ndokutsanangura kuti unogona kusakwanisa kuudza mutsauko futi. Mazhinji mawebhusaiti matsva anosanganisira kublogi seyakaenzana chikamu chemukati. Ehe, saiti senge yangu 'anotaridzika' kunge bhurogu - iine muunganidzwa wezvinyorwa zvemapepanhau pane peji reimba zvakateedzana zvakateedzana ... asi vamwe vamwe havatombosvika padhuze!
Ndiani anofanirwa kuve Kublogi?
Mumwe mubvunzo mukuru wanga uchibvunza kuti mablogging angabatsira sei mune zvisiri zvehunyanzvi kana zvematongerwo enyika maindasitiri. Blogs dzinozvikweretesa kune zvematongerwo enyika nekuda kwekupararira kwemhirizhonga nemari. Blogs vagara vakazvikweretesa zvakanaka kune tekinoroji nekuti, zvinoita kutarisana nazvo, kuva blogger inobudirira kazhinji kunoda hunyanzvi hwepamusoro hwehunyanzvi. Blogs anogona zvachose batsira mune chero indasitiri, zvakadaro! Injini dzichangoburwa dzeblogging uye zvemukati manejimendi manejimendi zvashandura sarudzo zhinji dzaimbove bhuku.
Shamwari yangu, Glenn, blogged vachiri kumission kuMozambique. Ndiri kushamisika kuti chitendero uye philanthropists havana kutora mabloggi akawanda. Fred Wilson mablog nezve kuve Venture Capitalist. Ndiri kushamisika pane ese maindasitiri asinga blog, chero. Sei masayendisiti asiri blog uye achigovana zvavakawana? Nei vatengesi vasingablogi nezve kuvhurwa kwezvitoro, kushandira vatengi, uye hunyanzvi? Sei Mutungamiri asiri blog? (Hapana anoteerera benzi redhiyo show!) Sei Mapurisa asingablogi uye kutaura nezve mutsauko wavari kuita munharaunda? Sei vadzidzisi vasinga blog uye nekugovana zuva ravo kubatsira vadzidzi nevabereki? Ivo vanofanirwa kuve !!!
Kubloga uye Zvemukati Management Sisitimu Convergence
Muenzaniso webhusaiti iyo isingatarise chero chinhu senge blog iri CNET. The chikamu chenhau cheCNET zvirokwazvo iri blog mune yega pfungwa yeshoko. Iwo zvinyorwa zviri mukusiyana kwenguva yekuverenga uye chimwe nechimwe chezvinyorwa chine permalink, inosanganisa zvinongedzo, makomenti, pings, uye kunyangwe mamwe emabhukimaki ekumaka. Asi inhau yenhau !?
Zvemukati manejimendi Masystem ari kubata nekublogi… kana zvinopesana. Vashandisi veWebhu Yekushandisa vanoziva iyo SEO mabhenefiti eblogging uye akabatanidza iwo maficha mune avo mashandisiro. Asi ivo havasati vagadzirisa dzakawanda dzenyaya, zvakadaro! Nezuro ini akanyora nezve kutarisa pane simba rako kuti ubudirire.
Blogging haina kusiyana. Pane zvakawanda zvekushandisa tekinoroji, uye zvakawanda kusimbisa zvirimo zvako. Vazhinji vanhu vanonyora akanaka mablogiki ane zvisingaite zvemukati asi yavo saiti inokundikana kukura… kwete nekuti iri yakaipa blog, asi nekuti blogger hainzwisise uye kushandisa tekinoroji kukwezva vaverengi vatsva.
Nekuda kwekuda kuziva, ndakaenda googog Blog Kudzidzisa. Ini handisi kuzotumidza mazita, asi ini ndakaongorora nezve gumi nemaviri emasaiti emakambani kana vanhu vakazvipatsanura se 'Blog Coaches'. Hapana kana mumwe wavo akataura nezve tekinoroji chaiyo! Mukuongorora ruzivo, vazhinji "Blog Varairidzi" vaingova vanyori uye vanyori vemazano. Pasina kupokana kuti izvi zvinhu zvakakosha zvekambani brand, asi geesh.
Ini ndinofungidzira kuti zvakaita sekumhanyisa mota uye isingatombo shandura magiya. Injini yako irikumhanya nekukurumidza sezvazvinogona, asi vamwe vese vari kubhururuka newe uye haugone kunzwisisa kuti nei! Iwe unonyatsoda murairidzi anonzwisisa mashandisiro anoita mota yese kana iwe uchida kuhwina mujaho, kwete kungo kutyaira chete. Iwe unoda mumwe munhu ari kuzosvina yega yega yekupedzisira yekumhanyisa uye simba kunze kweiyo blog NEYO blogging software. Kubudirira kwangu nekubloga kwave kuri kusangana kwemaviri. Ndinoona kuti dzimwe nguva ini handinyore zvakanaka, asi ndinozvigadzirira nekutora wega wega webhiza kubva muinjini yangu.
Tags: blog mudzidzisiblogging murairidzicmszvemukati manejimendi systemfred wilson
Tiger Woods haASHANDI pane Hwake Utera
May 10, 2007 pa 10: 33 PM
Chinyorwa chakanaka Doug.
Ndeipi musangano wewebhu wawakapinda? Ndiri kuenda kune imwe vhiki ino muChicago.
Ini ndinotarisira kuwana zvakawanda kubva mazviri senge iwe kubva kumusangano wako.
Vanhu vanobva kuMyBlogLog, VideoSticky uye BlogTalkRadio kutumidza vashoma vachange varipo. Inofanira kunge ichinyatsodzidzisa.
Ini ndichave nechokwadi chekugovana zvandinodzidza mukupera kwesvondo newe pamwe nevaverengi vako.
Chengetedza basa rakakura.
May 11, 2007 pa 1: 07 AM
Ndiri kushanda nevashoma vasina purofiti kuvabatsira kumisikidza mablog. Vakanga vambobhadhara mumwe munhu kuti agadzirise html pamasaiti avo kune zvakakosha zvinhu nekuti vaitya kukanganisa kukodha ...
Pane imwe nguva pandakavaratidza kuti vanogona nyore kugadzira yavo yemapepanhau / bulletins kuburikidza ne blog, ivo vakabva vadanana nayo.
May 11, 2007 pa 10: 10 AM
Ini ndaive ndiri mudiki "epamberi" chikamu neChitatu, asi ini zvakadaro ndakanakidzwa nenguva uye hurukuro. Kutenda nekutora nguva.
Ndanga ndichi blogga pachezvangu kweanenge makore matatu nehafu (ndinofunga vabereki vangu ndivo vaverengi vangu vakuru!), Uye ini ndiri mutsigiri mukuru wekushandisa blogging nehunyanzvi. Kushanda mune yakasarudzika isingabatsiri, zvakadaro, ini ndinogara ndichifanira kugadzirisa mazano nezve "kutengesa" uye "vatengi" kuti vakwanise basa redu rekuzivisa vanogamuchira uye kuziva vagadziri vemafirimu. Ini handina kuwana mukana wekubvunza, asi ini ndaizoda kuziva pane ako mafungiro ekuti iko kutenderera kwekublogi kunogona kushandira isiri-purofiti maringe nekambani.
Ndatenda zvakare nekuve chikamu chemusangano!
May 11, 2007 pa 10: 37 AM
Ndakafarira kuve kumusangano. Iri boka rakakura revanhu, munhu wese akasimbiswa uye akabatanidzwa. Ini handina kukwanisa kubatsira asi kufara ini (Pamwe yaive iyo Venti Mocha yandaive nayo zvisati zvaitika!).
Asiri-purofiti iboka rinoshamisa. Ndanga ndichisangana nevaviri pano munharaunda uye tichitaura zvakawanda nezveSocial Networking. Ndinofunga pane mikana miviri:
1. Kugovana ruzivo pakati pezvisiri purofiti. Handioni kukwikwidzana kwakawanda pakati pavo, zvinoshamisa kuti vanoedza kushanda pamwe chete! Kuisa ruzivo kunze kweblog kuunza nharaunda munharaunda pamwe inogona kunge iri nzira yekugovera matipi uye info uye kubatsira enharaunda asiri-purofiti yakazara.
2. Kugovana ruzivo nevako vanopa uye vatengi. Kungo daidza kambani 'Isiri-purofiti' kunoita kuti ndifunge kupfeka bhajeti uye nezvinetso zvinoshamisa. Muno, ndinoziva Indianapolis Symphony isiri-purofiti uye ivo vanokwanisa kutambanudza zviwanikwa senge bhizimusi remunhu. Ini ndinofunga zvingave zvakakosha kutaura izvo kune avo vanovabatsira! Ini ndinofunga vanhu vangave vachinyanya kuda kugovana vachiziva mashandisiro emari idzi. (Zvakare nekusimudzira zviitiko zvemuno, nezvimwewo)
Ini ndaive nekofi nezuro husiku nevanhu veIndianapolis Cultural Trail vanhu uye vakakurukura maratidziro akaitwa neArtiki neVaraidzo muNyenyedzi akaenda kumaodzanyemba. Vanoda nzira dzisingadhuri kuti vabudise izwi uye Blog ndiyo nzira yakanaka yekuita izvi!
Ndinoda kusangana nekofi uye kukurukura kuti ndingakubatsira sei vanhu!
May 11, 2007 pa 1: 29 PM
Mamwe eaya 'Blog Coaches' anondiyeuchidza nezvevatengesi vekare venyoka yemafuta. Chenjerera!
May 11, 2007 pa 7: 15 PM
Hongu - chimwe chezvinhu zvandakawana chinonakidza ndechekuti vashoma kwazvo vebloggi 'makochi' chaizvo vaive nemablog avo. Kana usiri kuzvirova wega, iwe ungaramba sei uchienderera nezve tekinoroji uye shanduko kune iyo 'blogosphere'?
Zvingaite sekuhaya SEO mubatsiri uyo anga asina webhusaiti. Zvinoshamisa kwazvo!